काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेपालमा जनमत संग्रह आवश्यक रहेको दोहोर्‍याएका छन्। पोखरामा बुधबार अखिल क्रान्तिकारीको अधिवेशनमा विप्लवले नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई दुई तिहाइले थिचेको उल्लेख गर्दै जनताको चाहनाअनुसार जनमतसंग्रह नै अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
‘हाम्रै केही साथीले जनमत संग्रह गरेर हुँदैन भन्नुभयो। नेपालमा जनमत संग्रह ल्यायौं। हामीले जित्छौं। सतप्रतिशत जित्छौं,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताले यो दलालहरूलाई सहन्छन् ? परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसैले यो ल्याउनुपर्छ।’ विप्लवले आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको रिहाइ नभएको भन्दै सरकारमाथि आक्रोश पोखेका छन्। गत फागनु २० मा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिएकोमा उनी रूष्ट बनेका छन्।
विप्लवले फेरि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने संकेत गरेका छन्। उनले सर्त लागु नगर्न हालिने सबै घेरा तोडिने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘हामीले तीनबुँदे सहमति गर्‍यौं। त्यो लागू नगरेर अरु कुनै शर्त थुपारिन्छ अनि हाम्रा जेलका साथीलाई छोड्न कुनै घेरा हालिन्छ भने त्यो तोड्दिन्छौं। सहमति कार्यान्वयन नभएको हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
गत फागनु २० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो। प्रतिबन्ध हटाउने, आफ्ना सबै नेता-कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सबै मुद्दा फिर्ता हुने सहमति छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सबै शीर्ष नेतालाई भेटे पनि यो विषयमा चासो नदिइएको उनले बताए।
आफूहरूमाथि बिनाकारण प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लवको भनाइ थियो। ‘कुनै ठूलो अपराध गरेका थिएनौं प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने। त्यस्तो कुनै अपराध गरेका थियौं ? नेपाली जनताको चाहना र नेपालको हितविपरीत कुनै काम गरेका थियौं ?’ उनको प्रश्न थियो।